Xpe mitsingevana Mat
Mpitondra fitaovam-piadiana mahery vaika
Izay mety amin'ny indostrian'ny fiara, fonosana fonosana, shockproof mekanika ary indostria hafa.
Ny NBR foam dia manana faharetana mirehitra sy fananana manarona, izay mety amin'ny indostria rehetra azonao eritreretina.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha, maotera, milina ary indostrian'ny fanorenana.
Ny orinasanay dia manana fitaovana fanodinana volavola mandroso sy famokarana. Afaka matoky tena hanome ny mpanjifa karazana vahaolana tontolo iainana fampiharana vokatra busa.
Ampiasaina be amin'ny fiara, fanamboarana, fonosana, entana fanatanjahantena ary indostria hafa.
Neoprene, antsoina koa hoe CR foam. Namboarina manokana izy io ho fingotra spaonjy mifangaro malefaka sy malefaka.
Amin'ny maha-mpanamboatra matihanina izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana ravina sombin-javatra sy ny fanovana foam, dia manana milina fanodinana foam izahay hanomezana fahafaham-po ny fitakian'ny mpanjifa avy amin'ny indostria samihafa. Maherin'ny 20 taona ny traikefa amin'ny famokarana foam, ahafahantsika manome vokatra avo lenta sy serivisy mahafa-po ho an'ny mpanjifanay.
Parkway Foam Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2001 ary miorina ao Changzhou. Ny zavamaniry dia mandrakotra velarana 10, 000 metatra toradroa ary ny fahafaha-mamokatra isan-taona dia 30, 000 metatra toratelo. Orinasa misahana manokana amin'ny famokarana ravina vita amin'ny rubber vita amin'ny foam (EVA foam, pe foam, neoprene / CR, foam EPDM) ary ny fiovan'ny foam (laminating, die cutting, fikolokoloana, sokitra, sns.).
Fanandramana amin'ny famokarana manan-karena Fitaovana fanodinana vovoka isan-karazany Amboary ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa Tombony bebe kokoa amin'ny vidiny sy serivisy
Fanandramana amin'ny famokarana manan-karena
Ny orinasanay dia manana tantara 16 taona, ary manana ekipa teknika za-draharaha sy ekipa mpivarotra efa za-draharaha
Fitaovana fanodinana vovoka isan-karazany
Nanangona milina sy fitaovana amin'ny famokarana karazana vokatra busa izahay hamaly ny filan'ny mpanjifanay isan-karazany
Amboary ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa
Hamboarinay tsirairay ny serivisy sy ny vokatra ilain'izy ireo tsirairay araka ny filan'ny mpanjifa samihafa. Raha tokony hivarotra vokatra mahazatra fotsiny.
Tombony bebe kokoa amin'ny vidiny sy serivisy
Raha ampitahaina amin'ny mpivarotra sy ny mpanelanelana amin'ny maha orinasa antsika dia afaka manome mivantana ny mpanjifa ny vidiny mirary indrindra izahay, nefa mandritra izany fotoana izany dia nanangana ekipa iray izay ampitahaina amin'ny serivisy mpanjifa any ivelany izahay.
Fanatrehana Auto Parts nanatrika
Fampirantiana famonoana horonam-bokatra aziatika
Rezimanta an-jatony ny varotra ivelany any Sina Atsinanana ...
Address: No.115 Caoshangcun Road, Qishuyan Street, Distrikan'i Wujin, Changzhou City Jiangsu Province China 213000
© Copyright - 2019-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra mafana - Sitemap
Mametaka tranokala, Kitapom-bolo mihazakazaka, Fonenana Xpe Camping Mat, Fonenana Xpe fitobiana an-tokotany ivelany, Fehin-kibo mihazakazaka, Fehin-drano mitaingina,